Company Profile - Dongguan DESUN Electronic Teknolojia Co., Ltd.
Dongguan DESUN Electronic Teknolojia Co., Ltd Natsangana tamin'ny Desambra 2013, ny orinasa no misy ao amin'ny indostria Park, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province, dia ny fikarohana sy ny fampandrosoana, famolavolana, ny famokarana ary ny varotra ao amin'ny iray amin'ireo vao misondrotra avo-Tech orinasa tsy miankina. Ny orinasa no tena ahitana vokatra brushless DC (tokantrano fitaovana paompy tsingerin'ny rano, masoandro paompy, elektronika fiara paompy, mozika loharano paompy, Aquarium paompy) sy ny tena kely-priming paompy sy ny paompy rano. Products dia be ampiasaina amin'ny orinasa, fambolena, simika, fitaterana, IT, fanorenana sy ny fitaovana an-trano an-tsaha sy ny maro hafa.
Tsy hitondra ny mpanjifa miaraka amin'ny hafanam-po! Ny fikatsahana ny tsara indrindra sy ny fanomezana! Izahay mifantoka amin'ny hafainganam-pandeha sy ny manovaova! Izahay mifantoka amin'ny zava-baovao manan-danja! Mikiry izahay tsy fivadihana sy ny tsy fivadihana!
Ny orinasa dia manana rafitra fanaraha-maso ny kalitao tanteraka, dia lasa ISO9000 sy ireo rafitra iraisam-pirenena taratasy fanamarinana kalitao. Ny fampiasana ny modely fitantanana maoderina, nandroso famokarana fitaovana sy tsara endrika ny fikarohana sy ny fampandrosoana mpiasa, ary foana in-fahatakarana lalina ny zavatra ilain'ny mpanjifa sy orinasa, hanatsarana ny vokatra nohavaozina, Alemaina ny zanak'i elektronika teknolojia dia lasa mpitarika ny orinasa.
Strong teknolojia fanohanana toy ny famolavolana sy ny fikarohana, ny fitaovana vaovao mandroso indrindra, fahaiza-manao matihanina, matihanina tsara, mifidy izahay mba hanome anao ny tsara indrindra fanompoana.
Ny paompy no natao ny ho ela velona sy avo fahombiazana ary manao amin'ny feo iva, ary tsy misy pitik'afo kely miovaova hovitrovitra amin'ny hafainganam-pandeha. Efa aondrana ny vokatra any Eoropa Andrefana, Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Azia Atsimo, Aostralia ary koa ny tsena an-trano Sinoa.